को हुन गैरकानुनी मिर्गौला प्रत्यारोपणबारे उजुरी दिने व्यक्ति ? जसका कारण डाक्टर र प्रहरीलाई हटकडी लाग्यो — Motivatenews.Com
को हुन गैरकानुनी मिर्गौला प्रत्यारोपणबारे उजुरी दिने व्यक्ति ? जसका कारण डाक्टर र प्रहरीलाई हटकडी लाग्यो
काठमाडौँ – नेपालका मिडियाहरुमा बाढी पहिरो र सत्तारुढ नेकपाभित्रको किचलो बारेमा समाचारहरु पढिरहेको पाठकलाई एउटा नयाँ खालको समाचार आयो ‘गैरकानुनी मिर्गौला प्रत्यारोपणको आरोपमा डाक्टर पक्राउ ।’ यसअघि पनि यस्ता घटनाहरु हुने गरेको अनुमान गरिएको भएता पनि यो समाचारले नेपाली समाजको बास्तविकता उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
गरिबहरुको गारिवीमाथि भएको यो अमानविय घटनाले नेपालको कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी र सार्वजनिक सेवामा बहाल व्यक्तिहरुको चरित्र र उनीहरुको नियतका बारेमा सबै कुरा छर्फङ्ग देखाएको छ ।
यो घटनाको सूचना प्रहरीले कसरी पायो र अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले एउटा सामाग्री तयार पारेका छौं । गत कार्तिक ३ एउटा बेनामी उजुरी प्रहरीमा परेको थियो । त्यही उजुरीका आधारमा गैरकानुनीरुपमा गरिने मिर्गौला प्रत्यारोपणको पोल खुलेको छ । परेको सो उजुरीकै आधारमा चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्स (सीएमएस) मा नक्कली कागजात खडा गरी विदेशमा रहेको व्यक्तिको विवरण प्रयोग गरेर तेस्रो मानिसको मिर्गौला झिकी प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा १२ जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस टिचिङ हस्पिटल भरतपुरका प्रमुख सञ्चालक ५५ वर्षीय डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, सोही अस्पतालमा कार्यरत ५० वर्षीय डा. बालकृष्ण कालाखेती, नोबेल अस्पतालका ६५ वर्षीय डा. राकेश कुमार वर्मा र अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार ४० वर्षीय रमेश काफ्ले रहेका छन् ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा प्रकासकीय अधिकृतमा कार्यरत ५४ वर्षीय रामचन्द्र ढकाल, काठमाडौँको टोखा नगरपालिका ३ निवासी प्रहरी सहायक निरीक्षक भीमप्रसाद खनाल, काठमाडौँ महानगरपालिका ३ रानीवारी बस्ने निलम्बित प्रहरी नायब निरीक्षक योगेन्द्रराज थपलिया, भक्तपुर निवासी रेश्मा राई, सोही जिल्ला निवासी जमुना राज भण्डारी, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष ५७ वर्षीय गोपाल महर्जन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका तात्कालिन खरिदार (हाल अवकाश प्राप्त) ५८ वर्षीय नवराज केसी र कार्यालयका सहायक रामकुमार केसी रहेका छन् ।
यस्तो छ मिर्गौला प्रत्यारोपरणको रामकहानी
यसमा मध्यस्तता गरेकी रेश्माले पहिले खोटाङ घर भएका २७ वर्षीय पुरुषलाई डोनरको रुपमा तयार गर्छिन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनलाई १० लाख रकम दिने प्रलोभन देखाइन्छ । रेश्माले नै निलम्बित प्रहरी नायब निरीक्षक योगेन्द्रराज थपलिया र प्रहरी सहायक निरीक्षक भीमप्रसाद खनालसँग मिलेर बाँकी सेटिङ गराउँछिन् । थपलिया यसअघि पनि गैरकानुनी मिर्गौला प्रत्यारोपरणमा परेर कारवाहीमा परेका व्यक्ति हुन् । उनी आफै पनि मिर्गौलाको बिरामी हुन् ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीलाई स्वास्थ्य स्थितिका कारण पक्राउ नगरिएको तर प्रहरीको निगरानीमा रहेको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले बताए । यसरी १२ जनाको नियोजित मिलेमतोमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
२०७७ असार २९ गते प्रकाशित